केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: दशै, दशा र हामी
दशै, दशा र हामी
सहर सुनसान हुदै छ अब दशै लागेछ क्यारे फेसबुकका भिताहरु हेर्दा पनि त्यस्तै भान भइ रहेको छ। खासमा यो दशै के हो र कसको हो मलाई पनि त्यति थाहा छैन । भन्छन् यो हिन्दुहरुको महान चाड, उसो भए अहिन्दुहरु यसमा रमाउनु किन? हुन त गणतान्त्रिक नेपालमा यो यस्को र त्यसको किन गर्ने सौहार्द्र रुपले सबैले सबैको चाड मिलेर मनाए के नै बिग्रने हो र? फेरी फेसबुक वालमा हेर्छु सबै सबैले शुभकामना आदान प्रदान गर्छन आफुलाइ दिइ सके पछि शुभकामनै साट्न त के नै फरक पर्ला र? लौ जा मैले पनि सबैलाई शुभकामना टक्राए तर केही साथीले गाली गरे शुभकामनाको लागि धन्यबाद तर यो त हिन्दुहरुको दशै हो यसमा तँ किन धेरै उछिल्लिएको ? म सँग यसको ठ्याक्कै जवाफ त छैन र मलाइ खास दशै पनि लागेको छैन तर जे होस मेरो पाच बर्षको भाइ र ८ बर्षकी बहिनीको एक हप्ता देखी नै खुसीले सिमानाघेको छ । सधै होमवर्क गर्न निकै कसरत गराउनु पर्ने यो पटक परिक्षा सकिने बितिकै देखी भ्याकेशन होमवर्कमा जुटेका छन् दुवै जना ।
दशैको बिदामा मामला जान पाइने र नया लुगा लाउन पाइने उमँग त छदैछ टिका थापेर पैसा जम्मा गर्ने लालच पनि उतिकै बढेको छ दुवैलाई। भन्छन यो पालाको दशैको टिका लाएर म झोला किन्छु अनि खै के के जाति खान्छु । तर तिनलाई यति धेरै उमँग ल्याउने दशै के हो थाहा छैन न त तिनलाई अहिले नै त्यो बुझ्नुको टाउको दुखाइ नै । अर्की बहिनी जो काठमाण्डौ बस्छिन तिनलाइ पनि उतिकै दशैको रन्कोले छोएको छ । बाबा ममि सँग दशै बिदामा घरजानलाइ एक महिना अगाडि देखी नै सहकार्य र सहमति जुटाउनमा ब्यस्त छिन । उनिहरुको स्कुल थोरै समयको लागि मात्र छुट्टि हुने हुनाले बाबा आमाको चाहाना छोरी यो पटक गाउ नजाउन तर कहा मान्छन र अचेलका भुराहरु ? हुन त खास गरि चाडबाड अझ यो दशै लाग्ने भनेको नै यिनै बालापन मै त हो नि । अलि बुझ्ने भए पश्चात अथवा अलि ब्यवहार टार्नु पर्ने उमेर आए पछि त यो दशैले उति धेरै उमँग नल्याउला भन्ने मेरो अडकल । किन कि मैले पनि त्यहि उमेर पार गर्दै आएकि हुँ । आठ दश बर्ष पछाडीका ति दशैलाई फर्केर हेर्दा सम्झनाका परेलीहरु ताजै हुन्छन । दशै ताका दाइ र दिदीहरुले ल्याइदिनु भएको त्यो फुलबुट्टे जामा नयाँ नयाँ लोभलाग्दा चप्पलका जोडिहरु लाएर कहिले साथीहरुलाइ देखाउ हुन्थ्यो मलाइ पनि। म आफु चिटिक्क नपरेकै भए पनि चिटिक्क परेका ति नयाँ बिदेशी लुगा चप्पलमा सजिएर मामला जानुको मज्जा नै अर्कै थियो । बल्ल एक वर्षमा एक पटक लाग्ने फुलपाती मेला हेर्न जानलाइ आमा सँग एक हप्ता अगाडी देखीको चिप्लो घस्नु पर्थ्यो । त्यो बेला ५ रुपैयाको रातो रिबन र ५ रुपैयाको चुरा पनि मेरा लागी असिम हर्ष ल्याउने चिज हुन्थे त्यसतै हुदो हो मेरा नानीहरुलाइ पनि आज। हिजो देखी नै मेरा नानीहरु टुडीखेल जाने आमाले ३० रुपैया पर्ने चिम्टि किन्नी दिन्छु भनेको भरमा खुसि कहा साटु कोस्लाइ सुनाम भएको छ । जे होस दशै भनेकै बालापनको लागि हो। जो जिबनमा एकपटक सबैले ब्यतित गरेका हुन्छन र फेरी पछि चाहेर पनि कसैले प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यो बालापन है अरु होइन ।
दशै दशै भन्छन् यो दशै हो या दशा ? भन्न त नहुने हो तर जब दशै आउछ तव दुर्घटना तथा घरमा दुख बिमारले च्याप्दै जान्छ ता पनि अबोध बालापनमा त्यसको के असर? जसले जे भोग्नु छ त्यो त सबै घरका ठुलाबडा नै त हुन नी । मेरो एकजना आफन्त जसलाइ म धेरै आदर गर्छु यति की मेरो आमा पछिको सम्मान पाउने उहा नै हुनुहुन्छ । उहा दश दिन देखी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएर रोग सित लडाइ लडि रहनु भएको छ । तर उहाको पिडाले उहाको नाता नातिनिलाइ खासै छुन सकेको छैन । किन भने तिनीहरुलाई दशै लागेको छ बिधालयले दशै छुट्टि दिएको छ । तिनलाई नया लुगा किन्नु छ जुत्ता र अन्य आवश्यक पर्ने चिजबिज पनि । वरिपरिका यि र यस्तै परिदृष्य हेरेर मनमा प्रश्न उठ्छ साच्चै यो दशैले उमँग ल्याउछ कि टेन्सन?
शान्ता भन्दै थिइन "दशै आयो दशै आयो भन्छन आएको त केही देख्या होइन ब्यारे जुन पसलमा गए पनि भिड जे किन्न पनि लाइन त्यहि हो कि क्याहो दशै ?" साच्चै दशैले पसलेहरुलाइ भ्याइ नभ्याइ पारेको छ अनि किन्ने ग्राहकहरुलाइ सास्ती । हाम्रा सहकर्मीहरुको पनि पसल छ । तिनलाइ पनि दशैमासमा मौका छोप्न अति हतार पर्छ । कहिले पाच बज्छ र अफिसबाट हतार हतार गरेर पसल जानु हुन्छ । भन्छन म बसेको बेला एकै छिनमा चार पाच हजारको बिक्रि हुन्छ अरुले त्यति पारा ल्याउदैनन् दिनभरको आम्दानी त्यही दुइतिन हजार हुदो हो त्यसैले पनि म चाडै पुग्नु पर्छ। हुन पनि हो यसो दुइचार पैसाकै लागी त दुख गर्छन नी मानिसहरु त्यहि पनि बर्ष दिनमा एक पटक दशै तिहारको बेलाँ मात्र अलि चल्दो हो नत्र सुख्खाराम ।
बिशेष गरि दशैताका हर चिज आवश्यक पर्छ । दैनिक खाध् उपभोग्य होस वा अन्य लत्ताकपडा चाडबाड आयो कि चटारो । बेच्ने किन्ने सबैको लागि एकखालको उमँग र समस्या दुवै एकै चोटि लिएर आउछन् यो चाडबाडले । बेच्ने ब्यापारीहरुको जहान परिवार थोरै छ र पसल ठुलो छ भने नाफा नकमिएला भन्ने पिर तर त्यो भन्दा पनि समाजका गरिव बर्गहरुको लागी अझ ठुलो पिर । खास गरि यो दशै आए पछि विचारा गरिबहरुलाइ सास्ति । नमनाउ भने सबैले मान्छन मनै त हो आफु एक्लै नमनाइ कसरि बस्ने ? मनाउ त के ले पुराउने ? महँगि आकाशिएको छ दिनानु दिन सगरमाथा उक्लेको यात्री झै उकालो उकालो तर आयश्रोतलाई देश सरकार र सँबिधानले असर पुराएकै छ । छोरा छोरीको डिमान्ड बढेर छोइ सक्नु छैन नराम्रो र नमिठो हात नलाउ भन्छन, मिठो मसिनोको लागी गोजि पनि बाक्लै हुनु पर्यो । त्यसैले त यहि दशैताका हरेक आपराधिक घटना घट्छन् जस्तै लुटपाट चोरी डकैति सबै । गत हप्तामात्र खोकु तिरका दुइ दिदी बहिनी धरान दिदीको घर हिडेका रे साथमा पच्चिस हजार रुपैया बोकेका रहेछन् अज्ञात ब्यक्तिहरुले बाटैमा झ्वाम पैसा त लग्यो लग्यो उल्टो गालामा चड्कन पनि खाएछन् दिदी बहिनीले । जे होस यो दशैले निम्त्याएको एउटा दशा नै हो ति दिदी बहिनीलाई।
दशै चर्चा धर्म र अर्थ हरेक कुरा सँग जोडिएर आएको छ । अझ दशै आए पछि हजारौ पशु पक्षीको दशा स्वत आउछन् । धार्मिक साँस्कृतिक नाममा बलि चढाएर ति अबोध पशु पँक्षीहरुले अकाल ज्यान गुमाउनु पर्छ । धेरै जस्तोले यो हिन्दुहरुको मात्र महान चाड भनेर भनि रहदा पनि तिनले पनि पशुपक्षिबध गरेर दशै मनाइ रहेकै हुन्छन् जस्तै कि हामी त दशै मान्दैनौ भन्छन तर घरमा अन्यबेला भन्दा भिन्न तरिकाले मासु ल्याएर भेटघाट रमाइलो गरि खान्छन् । कसैले हामी त रातो टिका लाउदैनौ भन्छन तै पनि सेतै भए पनि टिका त लाएकै हुन्छन तर मैले नबुझेको कुरा टिका लाउनु मात्र दशै मान्नु हो र? अझै पनि कन्फ्युजमै छु। जे होस घरमा भएको नभएको पशुपँक्षि बध गरेर खादा ति अबोध पशुपँक्षिलाइ दशैले निम्ताएको दशा हो । अनि टिका जमारा सँग आशिर्बाद मात्र नभै भए नभइ पैसा प्रदान गर्नु पर्दा दिनेहरुको लागि जोहो गर्नु पर्ने अर्थको झन्जट दशैले निम्त्याएको दशा नै हो भन्न मन लाग्छ मलाई त ।
लौ हिन्दुहरु मात्रको दशै भए पनि हामी सबै नेपालीको भए पनि छुट्टि त पाएकै छौ सबैले त्यसैले शुभ रहोस सबैको दशै ।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 10:57 PM
बहिनीका मननयोग्य विचारहरु पढ्न पाऊँदा खुशी लाग्यो। सबै चाडलाई आफ्नै मानेर शुभकामना बाँडेर मनाऊँदा राम्रो हुन्छ र समाजमा सौहार्दता बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि।
बहिनी र यो ब्लगका समस्त पाठकहरुमा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
According to my research, afteraforeclosed home is offered atabidding,
it is common to the borrower to be able to still havearemaining unpaid debt on the mortgage.
There are many loan companies who try and have all service fees
and liens paid back by the up coming buyer. On the other hand, depending
on specific programs, regulations, and state legislation there may be several loans that aren't easily settled through the switch of lending products. Therefore, the duty still remains on the debtor that has obtained his or her property foreclosed on. Thanks for sharing your opinions on this web site.
Also visit my web page: site for dating women
Feel free to surf to my web site :: dating websited
I used to be very pleased to find this internet-site.
! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.
Havealook at my website :: be dating site
Here is my weblog - facebook for sex
Takealook at my blog post :: dating sites and free
my webpage ... swedbangla.com